ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 35°N 33°E﻿ / ﻿35°N 33°E﻿ / 35; 33
Κυπριακή Δημοκρατία (ဂရိ)
Kıbrıs Cumhuriyeti (တူရကီ)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν[မှတ်စု ၁]
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (ညာဘက်အောက်) တွင် ပြသထားပြီး ဆိုက်ပရပ်စ်သမ္မတနိုင်ငံကို အစိမ်းရင့်ရောင်ဖြင့် ဖော်ပြထားပြီး နိုင်ငံကို မိမိဘာသာကြေညာထားသော မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ်ကို အစိမ်းရောင်တောက်ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ကျန်သော ဥရောပသမဂ္ဂကို အစိမ်း‌ဖျော့ဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဖွဲ့စည်းပုံ သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း
• လန်ဒန်-ဇူးရစ် သဘောတူညီချက်
၁၉၅၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်
• လွတ်လပ်ရေး ကြေညာခဲ့
၁၉၆၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၆ ရက်
၁၉၆၀ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်
• ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့
၂၀၀၄ ခုနှစ်‌ မေလ ၁ ရက်
• စုစုပေါင်း[မှတ်စု ၃]
၉,၂၅၁ km2 (၃,၅၇၂ sq mi) (အဆင့်: ၁၆၂)
၁,၁၇၀,၁၂၅[မှတ်စု ၃] (အဆင့် - ၁၅၈)
၁၂၃.၄[မှတ်စု ၃]/km2 (၃၁၉.၆/sq mi) (အဆင့် - ၈၂)
$၃၅.၉၇၀ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၂၆)
$၄၁,၅၇၂ (အဆင့် - ၃၅)
$၂၄.၉၉၆ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၁၄)
$၂၈,၈၈၈ (အဆင့် - ၃၃)
အလွန်မြင့် · ၃၃
ကျွန်း၏ အလျားမှာ ၁၄၅ မိုင်ခန့် ရှည်၍ အနံ မိုင် ၆ဝ ခန့်ရှိ၏။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် စတုရန်းမိုင် ၃၅၇၂ ရှိသည်။ တောင်ဘက်ပိုင်းနှင့် မြောက်ဘက်ကမ်းခြေတွင် တောင်တန်းများ ရှိသည်။ တစ်နှစ်လုံး ပေါက်ရေရသော မြစ်ချောင်းဟူ၍ မရှိချေ။ ဆည်မြောင်များ ဖောက်ထားသော ဒေသများတွင် ဂျုံ၊ မုယောစပါး၊ ဝါ၊ သံလွင် ပင်များ စိုက်ပျိုးကြ၏။ စပျစ်ခြံများ ရှိ၍ စပျစ်သီးခြောက်နှင့် အရက်များ ထွက်သည်။ ယင်းတို့ကို နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့သည်။ သိုးနွားများ မွေးမြူကြ၏။ ရှေးအခါက ကြေးနီ အမြောက် အမြား ထွက်ခဲ့ဘူးသည်ကို အစွဲပြု၍ ကျွန်း၏ အမည်ကို ဆိုက်ပရပ်စ်ဟု ရှေးက ဂရိတို့ မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပရပ်စ်ဟူသော စကား၏ ဇာစ်မြစ်မှာ ကြေးနီဟူ၏။
↑ The vice presidency is reserved foraTurkish Cypriot. However the post has been vacant since the Turkish invasion of Cyprus in 1974.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Including Northern Cyprus, the United Nations Buffer Zone in Cyprus
↑ မြောက်ပိုင်းဆိုက်ပရပ်စ် မပါဝင်
↑ .eu ဒိုမိန်းကို ဥရောပသမဂ္ဂရှိ အခြားသောနိုင်ငံများနှင့် မျှဝေသုံးစွဲသည်။
↑ National Anthem။ 21 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cyprus။ CIA။
↑ Cyprus။ Global Religious Future။ Pew Research Center။
↑ Europe :: Cyprus — The World Factbook – Central Intelligence Agency။
↑ Statistical Service – Population and Social Conditions – Population Census – Announcements – Preliminary Results of the Census of Population, 2011 (in el)။ Statistical Service of the Ministry of Finance of the Republic of Cyprus (29 December 2011)။ 15 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ United Nations, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Population Division (2013)။ World Population Prospects: The 2012 Revision, DB02: Stock Indicators။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ Report for Selected Countries and Subjects။ World Economic Outlook Database, October 2018။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (12 October 2018)။
↑ Fouskas, V. 2002. Eurasian gambles over Cyprus' European prospects[လင့်ခ်သေ]. Turkish Yearbook of International Relations (ISSN: 0544-1943): Vol. 33, pp. 183–207; on p. 186: "[In analysing Cyprus withinawider geopolitical context, t]he requirement is to decipher the parameters and the linkages of the balance of power in the Eurasian region, and in its Near Eastern subregion, to which Cyprus belongs."
↑ Cyprus is approximate to Anatolia (which comprises the bulk of Turkey) but it may be considered to be in Asia and/or Europe, which together constitute Eurasia. The United Nations classification of world regions places Cyprus in Western Asia; National Geographic also places Cyprus in Asia. Conversely, numerous sources place Cyprus in Europe such as the BBC  and www.worldatlas.com; it is alsoamember of the European Union. Additionally, sources may place Cyprus in the Middle East, e.g., the CIA World Factbook. Archived 26 December 2018 at the Wayback Machine.
↑ Invest in Cyprus website – figures do not include tourism to the occupied North  Archived6March 2008 at the Wayback Machine.
↑ The Non-Aligned Movement: Background Information။ Non-Aligned Movement (21 September 2001)။9February 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2000 – today: A decade of further expansion။ Europa။ European Union။ 15 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 19 January 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cyprus Archived 26 December 2018 at the Wayback Machine., CIA World Factbook ; CIA Atlas of the Middle East (1993) (online edition)
↑ Mallinson၊ William (June 30, 2005)။ Cyprus: A Modern History။ I. B. Tauris။ p. 81။ ISBN 978-1850435808။ Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ&oldid=727253" မှ ရယူရန်
တူရကီဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။